यी ५ जीवनमंत्र अपनाउनुहोस् :: तपाईले कहिल्यै झुक्नु पर्दै - Halesi News
विचार व्यक्त गर्नअघि एक पटक सोच्नुहोस् बोल्न वा विचार व्यक्त गर्नुअघि एक पटक चिन्तन गर्नुहोस्, ताकि तपाईको विचार गलत समयमा नपरोस् । यो एक सामान्य उपाय हो, हामी आफ्नो रवैयालाई परिवर्तन गरेमा जीवनमा धेरै कष्ट, समस्याको कामना गर्नु पर्दैन ।
आलोचनाबाट टाढा रहने र अर्कोलाई नउडाउने (सकारात्मकता) यदि तपाईमा माया, स्नेह, दया, करुणा वा कल्याण जस्ता सकारात्मक भावना बढी छन् भने जोसँगको सम्बन्ध सुमधुर र बलियो रहन्छ । तर, यसको विपरित रिस, राग, चिन्ता, आलोचना, गल्ती खोतल्ने बानी जस्ता नकारात्मक आचरण छन् भने सम्बन्ध मात्र होइन, तपाई आफैँ बिलाउनुहुन्छ । नकारात्मक भावनालाई कहिल्यै बढावा नदिऊ ताकि खुशी हुन कुनै बाहाना खोज्न नपरोस् । अरुको अलोचना गर्नुको सट्टा उसलाई प्रसंशा वा हौसला दिने बानीबासाल्नुपर्छ।
आफ्नो कमजोरीलाई ध्यानमा राख्ने तपाई दुःखी वा रिसाउन सजिलै सक्नुहुन्छ भने यो तपाईको कमजोरी हो । र यदि खुशी हुन हुन गाह्रो पर्छ वा साना कुरामा खुशी नमिल्नु एउटा कमजोरी हो । तपाई सामाजिक हुनुहुन्छ भने साना कुरामा पनि खुशी बन्न सक्नुहुन्छ । यस्तै, मानिसमा नराम्रा बानी चाँडै अपनाउने र विकासित गर्ने बानी हुन्छ । तर, राम्रो बानी अपनाउन निकै समय लाग्छ
खुशी हुन गाह्रो यदि तपाई ‘आजको समयमा जिउनु पर्छ’ भन्ने सोचाईको हुनुहु्न्छ भने तपार्ई त्यो खुशी व्यक्ति हो जसलाई देखेर वरपरका खुशी रहन्छन् । खुशी साना–साना कुरामा पाइन्छन्, तर प्राय जसो साना कुरामा मानिस दुःखी भएको पाउँछौ । यस शैलीलाई परिर्वत गर्न जरुरी छ, किनकि दुःखीपनले जीवन अघि बढ्न सक्दैन ।
आफूमा लागू माथिका कुरालाई एउटा चार्टमा उतार्नुहोस् र आफूले प्राय देखिइरहेने ठाउँमा टाँस्नुहोस् । आफूमा कमि महशुस गर्नुहोस्, जीवनमन्त्रको रुपमा जीवनमा अपनाउनुहोस् ।
sabhar daik khabar bata
Prevअब खान थाल्नुस् अम्बाको पात, तपाइलाई हुन्छ नसोचेको अचुक फाइदा
Nextपरापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलिङ्ग लाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन ।
यी १२ पाप गर्नु भएको छ ? तपाँईलाई कहिल्यै क्षमा मिल्दैन र जीवनभर सुख प्राप्ति हुदैन !
दाग बत्ति दिदा यस्तो…रविकी आमाको निधन, दुई दिन पनि टिकेन मेरो खुशी रवि ओड….(हेर्नुहोस् भिडियो)